Fomba fanaovana biodiesel. Ny biofuel an-trano namboarinay | Fanavaozana maintso
Ahoana ny fomba hanaovana biodiesel an-trano
Manaova biodiesel antsika manokana miaraka amin'ny menaka vaovao na efa niasa azo atao izany na dia misy olana sasany aza.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazaiko aminao ny fomba famoronana biodiesel ankoatr'izay olana voalaza etsy aloha fa ny hahafantarana izay hataontsika aloha.
Biodiesel dia Biofuel amin'ny rano azo avy amin'ny menaka legioma Rapeseed, tanamasoandro ary soja no be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao, na dia dinihina koa aza ny fahazoana azy ireo amin'ny ahidrano.
Ny toetoetran'ny biodiesel dia mitovy amin'ny an'ny diesel automatique raha ny hakitroky ny isa sy ny cetane, na dia manana teboka avo lenta noho ny diesel aza izy, toetra mampamora azy ny mampifangaro azy amin'ny farany ho an'ny solika. Ampiasaina amin'ny motera.
Fikambanana Amerikanina ho an'ny fitsapana sy ny fenitra ara-pitaovana (ASTM, fikambanana iraisam-pirenena momba ny fenitra manara-penitra) dia mamaritra ny biodiesel ho:
"Monoalkyl esters misy asidra matavy misy rojo lava azo avy amin'ny lipida azo havaozina toy ny menaka legioma na tavy biby, ary ampiasaina amin'ny motera fandrehitra famatrarana"
Na izany aza, ny esters izay be mpampiasa indrindra dia ny methanol sy ny etanol (azo avy amin'ny transesterification ny karazana menaka legioma na tavy biby na avy amin'ny esterification ny asidra matavy) noho ny vidiny ambany sy ny tombony simika sy ara-batana.
Ny mahasamihafa ny solika hafa dia ny biofuel na ny biofuel dia maneho ny maha-zava-dehibe ny fampiasana vokatra legioma ho toy ny akora, vokatr'izany dia zava-dehibe tokoa ny fijerena ireo toetra mampiavaka ny tsenan'ny fambolena.
Ary noho izany, marihina fa ny fampandrosoana ny indostrian'ny solika Tsy miankina amin'ny fananana akora akora eto an-toerana izany fa amin'ny fisian'ny fangatahana ampy.
Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fisian'ny fangatahana biofuel dia azo ampiasaina ny fampandrosoana ny tsenananao hampiroborobo ny politika hafa toy ny fambolena, mankasitraka ny famoronana asa amin'ny sehatra voalohany, ny fametrahana ny mponina any ambanivohitra, ny fivoaran'ny indostria ary ny asa fambolena, ary miaraka amin'izay dia mampihena ny vokatry ny tany efitra noho ny fambolena vokatra angovo.
Vokatra angovo voadio
ASTM koa dia mamaritra ny fitsapana isan-karazany izay tsy maintsy atao amin'ny solika mba hiantohana ny fiasa marina satria ny fampiasana biodiesel ho solika mandeha amin'ny fiara dia tsy maintsy jerena ny toetra mampiavaka ny esters izay mitovy amin'ny an'ny diesel. .
1 Tombony sy fatiantoka ny biodiesel
2 Ahoana no ahafahantsika manao ny biodiesel antsika manokana
2.1 Ny dingana
2.2 Vokatra ilaina
2.3 Fitaovana sy fitaovana (tokony hadio sy maina ny zava-drehetra)
3 Fiarovana, tena zava-dehibe
4 Afaka mamorona biodiesel amin'ny trano rehetra ve ianao?
5 Biodiesel vita an-trano any Espana
Tombony sy fatiantoka ny biodiesel
Ny iray amin'ireo tombony lehibe azontsika jerena amin'ny fampiasana an'ity biofuel ity fa tsy diesel dia ny Fiarovana ny harena voajanahary an'ny Tany satria loharanon'ny angovo azo havaozina.
Tombony iray hafa dia ny fanondranana biofuelRaha sanatria mitranga any Espana izy ireo dia mihena ihany koa ny fiankinan-doha amin'ny angovo fôsily, izay 80%.
Toy izany koa, manohana izy fampandrosoana sy fametahana ny mponina ambanivohitra izay natokana ho an'ny famokarana an'ity biofuel ity.
Etsy ankilany, manampy ny fihenan'ny famoahana CO2 amin'ny atmosfera, manafoana ihany koa ny olan'ny orana asidra satria tsy misy solifara izy ireo.
Amin'ny maha vokatra biodegradable sy tsy misy poizina azy io mampihena ny fahalotoan'ny tany ary ny loza ateraky ny poizina amin'ny fandatsahana tsy nahy.
anjara fiarovana bebe kokoa satria manana lubricity tena tsara izy ary teboka avo kokoa.
Raha ny momba ny fahasahiranana dia afaka mitanisa toy ny vidiny isika. Amin'izao fotoana izao, tsy mifaninana amin'ny diesel mahazatra io.
Mikasika ny fananana ara-teknika, manana sanda kaloria ambany, na dia tsy midika famoizana herinaratra na fiakarana lehibe amin'ny fihinanana aza izany.
Etsy ankilany, misy fitoniana ambany amin'ny oxygen, zava-dehibe io raha ny amin'ny fitehirizana, ary manana toetrany mangatsiaka ratsy kokoa, izay mahatonga azy tsy mifanaraka amin'ny maripana ambany dia ambany. Na izany aza, ireto toetra roa farany ireto dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fampidirana aditif.
Ahoana no ahafahantsika manao ny biodiesel antsika manokana
Raiso ny biodiesel anay mampidi-doza be noho ny vokatra simika izay tokony hampiasainay ary noho izany antony izany dia holazaiko ihany ireo dingana etsy ambony mba tsy hieritreritra ny hanao izany ao an-trano ianao raha tsy hoe manaraka ny fepetra fiarovana rehetra ankoatry ny ara-dalàna any Espana, satria tsy ara-dalàna ny famokarana an'ity biofuel ity.
Ny voalohany indrindra dia ny fanandramana amina litatra vaovao misy litatra satria mora kokoa noho ny menaka efa niasa io, na dia mikasa ny hanome ity solika farany ity aza izahay. Rehefa voafehinao ny menaka vaovao dia azonao atao ny mandroso amin'ilay menaka efa niasa ary blender no tena ilainao amin'izao fotoana izao, dia tadidio fa tsy azonao ampiasaina amin'ny zavatra hafa izany ka ilay blender dia tokony ho iray amin'ireo taloha na iray mora vidy.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny biodiesel dia azo avy amin'ny tavy fihinana legioma izay amin'ny fomba fijery simika dia fantatra amin'ny hoe triglycerides.
Ny molekiola triglyceride tsirairay dia voaforona molekiola asidra 3 mifamatotra amin'ny molekiola glycerine iray.
Ny fanehoan-kevitra kasaina (antsoina transesterification) ho an'ny fananganana ny biofuel antsika dia ny manasaraka ireo asidra matavy ireo amin'ny glycerine manampy antsika amin'ny catalyst, dia mety ho NaOH na KOH, ary amin'izany dia afaka mampivondrona sy mampivondrona ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny molekiola methanol na etanol.
Iray amin'ireo vokatra hampiasainay ny alikaola. Mety ho izany methanol (izay mamorona ester methyl) na ethanol (izay mandrafitra ny estan'ny etil).
Eto dia ny olana voalohany dia satria raha misafidy ny hanao biodiesel ho methanol ianao dia holazaiko aminao fa tsy afaka manao an'io trano io ianao satria ny zavatra azo dia avy amin'ny entona voajanahary.
Na izany aza, ny etanol dia azo vokarina ao an-trano ary izay misy dia avy amin'ny zavamaniry (ny sisa avy amin'ny solika).
Ny lafy ratsy dia izay ny fanaovana biodiesel miaraka amin'ny étanol dia sarotra kokoa noho ny amin'ny methanolAzo antoka fa tsy an'ny vao manomboka.
Samy methanol sy etanol poizina izy ireo izay tsy maintsy tadidinao foana ny fiarovana.
Zava-mahadomelina misy poizina afaka manajamba na mamono anao izy ireo, ary toy ny fisotroana azy ihany koa dia manimba izany amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny hoditrao sy fofonaina ao anaty etona ao aminy.
Ho an'ny fitsapana ao an-trano dia azonao atao ny mampiasa solika barbecue izay misy methanol na dia tsy maintsy jerenao aza ny degre ny fahadiovana dia tsy maintsy farafaharatsiny 99% ary raha misy akora hafa dia tsy hanao zavatra toy ny etanol denatured.
Ny catalystAraka ny efa nolazainay, izy ireo dia mety ho KOH na NaOH, potasioma hidroksida ary soda kaustika, iray mora hita kokoa noho ilay iray hafa.
Toy ny methanol sy etanol, ny soda dia azo vidiana mora nefa sarotra kokoa ny mitantana noho ny potasioma hidroksida, izay tena atoro ho an'ny vao manomboka.
Samy hygroscopic izy ireo, midika izany fa mandray mora foana ny hamandoana avy amin'ny rivotra izy ireo, mampihena ny fahafahany mamoaka ny valiny. Tokony hotehirizina ao anaty kaontenera voaisy tombo-kase izy ireo.
Ny fizotrany dia mitovy amin'ny KOH sy ny NaOH, fa ny vola dia tokony ho 1,4 avo heny (1,4025).
Ny fampifangaroana ny methanol miaraka amin'ny hydroxide potassium dia mamorona ny sodium methoxide izay manintona be ary ilaina amin'ny famokarana biodiesel.
Ho an'ny methoxide dia ampiasao ireo kaontenera vita amin'ny HDPE (polyethylene avo lenta), vera, vy tsy misy fangarony, na vita amin'ny enamel.
Fitaovana sy fitaovana (tokony hadio sy maina ny zava-drehetra)
Menaka legioma vaovao, tsy masaka iray litatra.
200 ml misy methanol madio 99%
Catalyst, izay mety ho hydroxide potasioma (KOH) na sodium hidroksida (NaOH).
Mandanjalanja miaraka amin'ny vahaolana 0,1 gr (mbola tsara kokoa miaraka amin'ny vahaolana 0,01 gr)
Fandrefesana vera ho an'ny methanol sy menaka.
Kaontenera antsasaky ny litatra HDPE fotsy translucent ary satroka visy.
Fantsona roa izay tafiditra ao am-bavan'ny fitoeran'ny HDPE, ny iray ho an'ny methanol ary ny iray ho an'ny catalyst.
Tavoahangy plastika PET misy litatra roa litatra (rano normal na tavoahangy soda) ho an'ny sedimentation.
Tavoahangy plastika PET roa-litatra roa hosasana.
Fiarovana, tena zava-dehibe
Ho an'izany dia tsy maintsy jerentsika ny fepetra fiarovana marobe ary koa fitaovana fiarovana toy ny:
Ny fonon-tànana mahatohitra ireo vokatra hoentintsika, ireo dia tsy maintsy ho lava ka manarona ny tanany ary arovana tanteraka ny sandry.
Saribao sy solomaso miaro hanarona ny vatana manontolo.
Manana rano mandeha eo akaiky eo foana eo am-pitantanana ireo vokatra ireo.
Ny toeram-piasana dia tsy maintsy asiana rivotra tsara.
Aza miaina entona. Ho an'ity dia misy sarontava manokana.
Tsy misy olona ivelan'ny fizotrany, na ankizy, na biby fiompy eo akaiky eo.
Afaka mamorona biodiesel amin'ny trano rehetra ve ianao?
Manampy vazivazy kely amin'ny fahamatorana be ao amin'ilay andian-dahatsoratra "La que se avecina" dia mandoko mora foana amin'ilay andian-teny hoe "manofahofa izay gerund" fa raha ny tena izy dia tsy misy mihitsy, ankoatry ny mampidi-doza tokoa, ary ianao irery no manana hita fototra, ny fitaovana.
Raha tsy manome torolàlana amin'ny antsipiriany bebe kokoa, azoko antoka fa mbola lavitra ny lalana hanaovana biodiesel hatramin'ny voalohany. fanivanana menaka efa niasa (izay iray mahaliana antsika), avy eo dia tsy maintsy mamorona ny sodium methoxide isika, manatanteraka ny fihetsika ilaina, manao famindrana sy fisarahana.
Tokony hojerentsika koa ny kalitaon'ny vokatra vita amin'ny fanandramana fanasan-damba sy fanamainana farany.
Biodiesel vita an-trano any Espana
Na eo aza ny tombony azon'ny biodiesel, amin'ny Tsy ara-dalàna i Espaina amin'izao fotoana izao hametrahana azy ao an-trano.
Ny firenena sasany dia mamela ny famokarana an'ity biofuel ity ary mivarotra kitapo famokarana mihitsy aza mba hahafahan'ny olona manana fepetra fiarovana mifanaraka amin'izany.
Ho ahy manokana dia ireto misy antony 2 momba ny tsy ara-dalàna ny biodiesel an-trano.
Ny voalohany dia miahy antsika i Espana ary Noraran'izy ireo ny fanamboarana azy noho ny loza izany dia mitaky rehefa mitantana akora simika mampidi-doza.
Ny faharoa dia tsy liana amin'ny zava-misy i Espana fa afaka mamokatra biofuel ny olom-pirenena rehetra Tombontsoa ara-toekarena.
Na ahoana na ahoana, tsy isalasalana fa maneho frein mankany amin'ny fiovan'ny angovo mety hitranga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » Biodiesel » Ahoana ny fomba hanaovana biodiesel an-trano
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny turbine rivotra
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny radiator hafanana manga